Ihe Ndị Na-eme n’Ụwa | Teta! Julaị—Ọgọst 2013
Otú Di na Nwunye Ga-esi Kwụsị Ịna-agbachi Ibe Ha Nkịtị
Ihe Ị Ga-eme Ka Ndị Omekome Ghara Inweta Gị!
Ụdị Onye Chineke Bụ
Nku Azụ̀ Weel
Ụmụ Ndị Ikom Jekọb
TETA! JULAỊ 2013
N’Amerịka, e nwere ndị na-anọ n’ọdụ ụgbọelu na-ejichi ihe ndị a na-ekwesịghị iji aba ụgbọelu. Ihe ndị ha jichiri kemgbe afọ iri eruola iri nde ise. Naanị n’afọ 2011, ha jichiri ihe karịrị otu puku égbè na narị abụọ. Ọtụtụ n’ime ndị a natara égbè ndị ahụ sị na ha amaghị mgbe ha ji were ha.
O nwere ihe ndị na-ahụ maka ụlọ akwụkwọ na Brazil na-adụnyezi n’uwe ụmụ akwụkwọ. Ihe mere ha ji adụnye ya bụ ka ụmụ akwụkwọ ghara isi n’ụlọ akwụkwọ gawa ebe ọzọ n’ebughị ụzọ nara ikike. Ọ na-abụ mgbe ọ bụla nwa akwụkwọ bịara akwụkwọ, ihe ahụ ezigara papa ya ma ọ bụ mama ya ozi. Ọ bụrụkwa na ọ bịaghị akwụkwọ n’oge, ihe ahụ ezigakwara ha ozi.
Na Nọọwee, ọ bụ ndị ọchịchị na-ekwubu ihe na-eme na Chọọchị Luta. Ma, o nwere ihe mere n’oge na-adịbeghị anya. Ndị omeiwu obodo ahụ kpebiri na ọ bụghịzi ndị ọchịchị ga na-ekwu ihe a na-eme na chọọchị.
A gbara ụfọdụ ndị Chek Ripọblik ajụjụ ọnụ gbasara ọrụ ha. E kee ndị ahụ a gbara ajụjụ ọnụ ụzọ atọ, ụzọ abụọ n’ime ha kwuru na a gbasaa ọrụ, a na-ezitere ha ozi n’ekwentị ma ọ bụ na iimel. Mgbe ụfọdụ, a na-akpọkwa ha na fon. Ihe e kwo akpọ ha bụ ọrụ ha. Ihe karịrị otu ụzọ n’ime ndị ahụ a gbara ajụjụ ọnụ kwuru na ọ bụrụ na ha emeghị ihe a gwara ha ozugbo, ọ pụtara na ha emeghị ihe ha kwesịrị ime.
Ndị India na-akọpụtahi nri nne kemgbe afọ iri abụọ. Osikapa na ọka ha na-echekwa nwere ike iru iri nde tọn asaa na otu. Ma, agụụ ka na-anyụ ọtụtụ ndị India anya. E kee nri ha na-echekwa ụzọ iri, ọ bụ naanị ụzọ anọ ka ha na-eri. Ihe kpatara ya bụ na ndị na-ahụ maka nri n’obodo ahụ anaghị akwụwa aka ọtọ. Ihe ọzọ abụrụ na ndị obodo ahụ na-emefusị nri.
Ihe Ndị Na-eme n’Ụwa Julaị—Ọgọst 2013
mailto:?body=Ihe Ndị Na-eme n’Ụwa Julaị—Ọgọst 2013%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D102013162%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Ihe Ndị Na-eme n’Ụwa Julaị—Ọgọst 2013
JULAỊ 2013 Ihe Ị Ga-eme Ka Ndị Omekome Ghara Inweta Gị
mailto:?body=JULAỊ 2013 Ihe Ị Ga-eme Ka Ndị Omekome Ghara Inweta Gị%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fpub%3Dg13%26issue%3D201307%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=JULAỊ 2013 Ihe Ị Ga-eme Ka Ndị Omekome Ghara Inweta Gị